1 Samuel 26 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
26 Ka oge na-aga, ndị Zif+ bịakwutere Sọl n’ime Gibia,+ sị: “Ị̀ makwa na Devid zoro n’ugwu Hakaịla+ nke chere Jeshaịmọn+ ihu?”
2 Sọl wee bilie+ gbadaa n’ala ịkpa Zif, puku ndị ikom atọ,+ bụ́ ndị Izrel a họrọ ahọ, sokwa ya, ịga chọọ Devid n’ala ịkpa Zif.
3 Sọl wee maa ụlọikwuu ya n’ugwu Hakaịla, nke chere Jeshaịmọn ihu, n’akụkụ okporo ụzọ, ma Devid bi n’ala ịkpa. O wee hụ na Sọl achụrụwo ya bata n’ala ịkpa.
4 Devid wee zipụ ndị nledo+ iji jide n’aka na Sọl abịawo.
5 Mgbe e mesịrị, Devid biliri gaa n’ebe Sọl mara ụlọikwuu ya, Devid wee hụ ebe Sọl dina, tinyere Abna+ nwa Nee onyeisi ndị agha ya; Sọl dina n’ime ụlọikwuu,+ ndị agha ya makwara ụlọikwuu gburugburu ya.
6 Devid wee jụọ Ahimelek onye Het+ nakwa Abishaị+ nwa Zeruya,+ nwanne Joab, sị: “Ònye ga-eso m gbadaa n’ebe Sọl nọ n’ụlọikwuu ya?” Abishaị wee zaa, sị: “Mụ onwe m ga-eso gị gbadaa.”+
7 Devid na Abishaị wee gaa n’ebe ndị agha ahụ nọ n’abalị; ma, lee! Sọl dina na-arahụ ụra n’ime ụlọikwuu ahụ, e gwunyere ube ya n’ala n’akụkụ isi ya, Abna na ndị agha ahụ dinakwa gburugburu ya.
8 Abishaị wee sị Devid: “Chineke enyefewo onye iro gị n’aka gị taa.+ Biko, hapụ m ka m jiri ube a magide ya n’ala naanị otu ugboro, agaghị m ama ya ugboro abụọ.”
9 Otú ọ dị, Devid sịrị Abishaị: “Egbula ya, n’ihi na ònye setịworo aka ya metụ onye Jehova tere mmanụ+ ma ka bụrụ onye aka ya dị ọcha?”+
10 Devid wee gaa n’ihu ịsị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ Jehova n’onwe ya ga-eme ya ihe;+ ma ọ bụkwanụ ụbọchị ya ga-eru,+ o wee nwụọ, ma ọ bụ, ọ ga-aga agha,+ e wee laa ya n’iyi.+
11 Tụfịakwa!+ Dị ka Jehova si ele ihe anya,+ agaghị m esetị aka m+ metụ onye Jehova tere mmanụ.+ Ya mere, biko, weta ube ahụ dị n’akụkụ isi ya na ihe mmiri ahụ, ka anyị pụwa.”
12 Devid wee were ube ahụ na ihe mmiri ahụ dị n’akụkụ isi Sọl, ha wee pụwa; ọ dịghịkwa onye hụrụ ha+ ma ọ bụ onye matara ihe merenụ ma ọ bụ onye tetara, ebe ha niile nọ n’ụra, n’ihi na ọ bụ oké ụra+ nke si n’ebe Jehova nọ buuru ha.
13 Devid wee gafee n’akụkụ nke ọzọ ma guzo n’elu ugwu n’ebe dịtụ anya, ohere nke dị n’agbata ha dịkwa ukwuu.
14 Devid wee malite ịkpọ ndị agha ahụ na Abna nwa Nee òkù, sị: “Abna,+ ị́ gaghị aza?” Abna wee zaa, sị: “Ònye ka ị bụ nke na-akpọ eze?”
15 Devid wee sị Abna: “Ị́ bụghị nwoke? Ònye dịkwa ka gị n’Izrel? Gịnịzi mere i cheghị onyenwe gị eze nche? N’ihi na otu onye batara ka o gbuo eze bụ́ onyenwe gị.+
16 Ihe a i mere adịghị mma. Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ unu kwesịrị ịnwụ,+ n’ihi na unu echeghị onyenwe unu nche,+ bụ́ onye Jehova tere mmanụ.+ Leenụ ebe ube eze na ihe mmiri+ ya dị, bụ́ ndị dịbu n’akụkụ isi ya.”
17 Sọl wee mata na ọ bụ olu Devid wee sị: “Devid nwa m, ọ̀ bụ olu gị bụ ihe a?”+ Devid wee zaa, sị: “Ọ bụ olu m, onyenwe m eze.”
18 O kwukwara, sị: “Gịnị mere onyenwe m ji na-achụgharị ohu ya,+ gịnị ka m mere, oleekwa ihe ọjọọ ị hụrụ n’aka m?+
19 Biko, ka onyenwe m eze nụrụ okwu ohu ya: Ọ bụrụ na ọ bụ Jehova kpaliri gị imegide m, ka ọ nụrụ ísì àjà ọka.*+ Ma ọ bụrụ ụmụ mmadụ,+ ha bụ ndị a bụrụ ọnụ n’ihu Jehova,+ n’ihi na ha achụpụwo m taa wee mee ka ọ dị m ka ọ̀ bụ na mụ esoghị n’ihe nketa Jehova,+ wee sị, ‘Gaa fewe chi ọzọ!’+
20 Ma ugbu a, ekwela ka ọbara m tasa n’ala n’ihu Jehova;+ n’ihi na eze Izrel apụwo ịchọ otu àkpịrị́,+ dị nnọọ ka mmadụ si achụgharị ọkwà n’elu ugwu.”+
21 Sọl wee sị: “Emehiewo m.+ Lọta, nwa m Devid, n’ihi na agakwaghị m eme gị ihe ọjọọ, ebe ọ bụ na mkpụrụ obi m dị oké ọnụ ahịa+ n’anya gị taa. Lee! Ezuzuwo m nzuzu, ehiewokwa m ụzọ nke ukwuu.”
22 Devid wee zaa, sị: “Lee ube eze, ka otu n’ime ụmụ okorobịa gị gafeta bịa were ya.
23 Ọ bụkwa Jehova ga-akwụ onye ọ bụla ụgwọ ezi omume o mere+ nakwa ikwesị ntụkwasị obi ya, ebe ọ bụ na Jehova nyefere gị n’aka m taa, ma obi ekweghị m isetị aka m metụ onye Jehova tere mmanụ.+
24 Ma, lee! dị nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ukwuu taa n’anya m, ka mkpụrụ obi m dịkwa ukwuu otú ahụ n’anya Jehova,+ ka o wee napụta m ná mkpagbu niile.”+
25 Sọl wee sị Devid: “Bụrụ onye a gọziri agọzi, nwa m Devid. Ọ bụghị naanị na ị ga-akpa ike, kama ị ga-abụkwa onye mmeri.”+ Devid wee pụwa; ma Sọl laghachiri n’ụlọ ya.+
^ 1Sa 26:19*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D9%26Chapter%3D26%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl